Allgedo.com » Wasiirka gaashaandhiga oo kahadlay weerar lagu qaaday gaadiid ay la socdeen Wasiiro
Wasiirka gaashaandhiga oo kahadlay weerar lagu qaaday gaadiid ay la socdeen Wasiiro
Print here| By: allgedo.com: Monday, December 3, 2012 // Jawaabaha waa la xiray
Wasiirka wasaarada Gaashaandhiga xukuumada Soomaaliya C/xakiin Xaaji Maxamuud “Fiqi”,ayaa faahfaahin ka bixiyay weerar loo geystay kolonyo gaadiid ay la socdeen oo marayay deegaano ka tirsan Shabeelaha Hoose.
Wasiirka ayaa sheegaya in weerarkii shalay loo geystay gaadiidka ay la socdeen inuusan aheyn mid sidaasi usii weyn ,isagoo sheegay in ciidamo kooban oo Alshababa ah ay keymaha u galeen.
Fiqi ayaa xusay inay isla socdeen wasiirka arimaha gudaha iyo amniga qaranka iyo wasiirka cadaalada iyo garsoorka,waxaana ka mid ah wafdigaasi xildhibaano baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan.
Isagoo la hadlay laanta AfSoomaaliga ee VOA Fiqi ayaa xusay in weerarka ka dib ay gaareen magaalada Marka ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Waxaa la weydiyay sababta iyaga oo ay isla socdeen ciidamada AMISOM iyo Wasiiro dhowr sida ay ku suurto gashay in dhalinyaro yar ay wadada u galeen,ayuu sheegay in weerarkaasi uusan aheyn mid sidaasi usii weyn.
“Ma ahan weerar la sheeg sheego weerarkasi dhalinyaro yar ayaa labo xabo soo riday kadibna baxsaday”.ayuu yiri Cabdixakiin Fiqi.
Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarkaas, mana ahan markii ugu horeysay oo weerar noocaan oo kala ah ay ku qaadaan saraakiil dowlada katirsan gudaha gobolkaas.